कसरी भयो उदीपसंग आँचलको भेट ? «
कसरी भयो उदीपसंग आँचलको भेट ?
Published : 15 February, 2020 1:56 pm
चलचित्र ! भ्यालेन्टाइन डे नजिकिएसंगै आँचल शर्मा र उदीप श्रेष्ठको विवाहसंगै यी दुइको प्रेमले पनि चर्चा पाईरहेको छ । आँचल र पोषणविद समेत रहेका उदिपको पनि पहिलो भेटघाट फेसबुकले नै गराएको हो । यहीँ उनीहरूको देखादेख भयो, चिनजान भयो, अनि उनीहरू प्रेममा परे ।
दुवैको प्रेमलाई परिवारले पनि हरियो झण्डा देखाइदिएपछि उनीहरू फागुनको २९ गते विवाह गर्दैै छन् । यसै बीच आँचलले सम्पूर्ण साप्ताहिकसंग उदीपसंग प्रेमको बारेमा बोलेकी छिन् । आँचल र उदीपलाई भेट गराउने श्रेय जान्छ उनको मामाको छोरीलाई ।
आँचलले आफु ज्यान घटाउनको लागि गरिने डाइट प्लानको समयमा भएको बताइन । उनले बहिनिकै मार्फत उदीपले फेसबुकमा फ्रेण्ड रिक्वेस्ट पठाएपछि आफुले कुराकानी गर्न थाल्दै जाँदा चिनजान बढेको बताइन । उदीपको स्वभावबाट इम्प्रेस भएकी आँचललाई विस्तारै मायामा परेको आभाष भयो । आँचल उदिपको केयर गर्ने बानीको कायल छिन् । उनी स–साना कुरा पनि ख्याल गर्छन् ।
उता उदिप आँचललाई असल र पर्फेक्ट केटी मान्छन् । उदीप र आँचल चिनजान सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रारम्भ भएपनि भेट भने काठमाडौँमा भएको थियो । उदीप अमेरिकाबाट फर्किएपछि आँचलसंग बाक्लै कुरा गर्न थाले । आँचलले पनि उदीपमा सरलता पाइन् । यी दुइको पहिलो भेट उदीपकै कारमा १५ मिनेटको लागि भएको थियो । उदीपले भेट्ने प्रस्ताव राखेपछि आँचलले उनकै कारमा भेट्ने शर्त राखिन् ।आँचलले कयौँ पटक बहाना बनाएपछि भेट्न राजी भएकी थिइन् ।
उदिपको सुर थियो– भेटेपछि कुनै रेस्टुरेन्टमा जाउँला र बसुँला। तर, भेट भएपछि पनि आँचल आफ्नो कुरामा पक्का निस्किइन् । गैरीधाराको रेड मड क्याफेबाट गाडी चढेकी आँचललाई लिएर उदिपले एक फन्को लगाए र त्यहीँ छाडिदिए। त्यो समयमा पनि आँचलले उदिपलाई एकचोटि पनि नजर जुधाएर हेरिनन् । यो सन् २०१८ अक्टोबर ३१ को दिन थियो । तर, यही छोटो भेटले अनिगिन्ती भेटका लागि बाटो खोल्यो । भोलिपल्ट भेटेर तीनचार घण्टा सँगै बिताएका उनीहरूले त्यसयता भने काठमाडौँ र छेउछाउमा रहँदा एकअर्कालाई नभेटेको दिन छैन ।
कतिसम्म भने आँचल सुटिङका लागि धादिङ, भकुण्डेबेसीमा रहँदा पनि आधा घण्टाकै लागि सही, उदिप उनलाई भेट्न जान्थे । काठमाडौँमा रहँदा त उनीहरू दिनको एक चोटि भेट्ने रुटिन आजका दिनसम्म पनि तोडिएको छैन ।